Dowladda Soomaaliya oo War kasoo saartay heshiiska Sacuudiga & Qatar - Awdinle Online
Dowladda Federaalka ah ee Soomaaliya ayaa ka hadashay heshiiska horudhaca ah oo khilaafkii ka dhex-jiray ay ka gaareen dowladaha Sacuudiga iyo Qatar, kaas oo muddo soo jiitamayay.
War-saxaafadeed kasoo baxay Villa Soomaaliya ayaa waxaa lagu soo dhaweeyay hehsiiskaas, iyada oo looga mahad celiyay dadaalka uu wado Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Kuweyt.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay soo dhaweynaysaa bayaanka Wasaaradda Arrimaha Dibadda dalka Kuweyt ee ku saabsan miro-dhalka dadaallada dib u heshiisiinta Boqortooyada Sucuudiga iyo Dowladda Qatar.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay bogaadinaysaa waanwaanta iyo dadaalkii joogtada ahaa ee Amiirkii hore ee dalka Kuweyt, Alle ha u naxariistee, Sheekh Sabaax Axmed Aljaabir uu ku bixiyey xal u helidda khilaafkan.
Dowladda Federaalka Soomaaliya waxay ku faraxsan tahay dadaallada Amiirka dalka Kuweyt Amiir Nawaaf Axmed Aljaabir iyo hoggaamintiisa wadahadallada lagu dhammeystirayo soocelinta xiriirka ka dhaxeeya labada dal iyo dad ee walaalaha ah iyo guud ahaan dalalka Khaliijka.
Ugu dambeyntii, Dowladda Federaalka Soomaaliya waxaa mar walba ka go’an xoojinta xiriir diblomsiyadeed oo ku dhisan dhexdhexaadnimo, wax wadaqabsi iyo ilaalinta xasilloonida iyo madaxbannaanida dalalka dan-wadaagta ah.
Markii uu bilaawday khilaafka dowladaha Sacuudiga iyo Qatar oo dalal uu Sacuudiga kujiro ay xiriirka u jareen dowladda Qatar ayaa dowladda Soomaaliya waxaa ay khilaafkaas ka noqotay dhex-dhexaad, Go’aankaas oo lagu dhaliilay.
Previous articleQM oo faragelisay xaalada kajira degaannada Hir-Shabeelle
Next articleGuddiga doorashooyinka oo baaq u diray Beesha Caalamka
Puntland oo Guddi u saartay Beelo dagaalamay
Haween hubeysan oo ku dhawaaqay inay kasoo horjeedaan Maamulka Hir-Shabeelle
RW Rooble oo digniin kama dambeys ah u diray Hay’adaha Garsoorka
Gudoomiyihii Gobolka Gedo ee dowladda oo xilkii laga qaaday & Arrin ka dhalatay
Shirkii Golaha Wasiirada Soomaaliya oo baaqday & hal arrin oo taagan
James Swan oo cadaadis ku bilaabay dowladda & Dowlad Goboleedyada
Sacuudiga oo soo saaray Go’aan ka dhan ah Dowladda Soomaaliya
Jadwal ay soo saareen guddiga lagu muransan yahay ee doorashooyinka oo markale fashilmay
Al-Shabaab oo weerar culus oa fuliyay Kenya iyo xogo laga helay